Alaabada Apple | Xogta IPhone (Bogga 15)
Xulashada Dukaanka Abka: Hordhaca sawir qaadista
Apple wuxuu ka xushaa barnaamijyada ugu fiican ee la xiriira sawir qaadida dhamaan Dukaanka App si uu u muujiyo qof kasta oo booqda dukaanka barnaamijka
Laba sano oo Tim Cook ah madaxa shirkadda Apple
Laba sano ayaa horey looga soo maray Tim Cook oo ah madaxa Apple. Khariidadaha fiasco, soo saarista iPad Mini iyo daqiiqado kale ayaa ka dhex muuqday.
Dhismihii Apple Apple Store dib ayuu u bilaabmay
Shirkada Cupertino ayaa dib u bilawday mashruucii lagu dhisayay Apple Store magaalada Brisbane, mashruucan oo horeyba loo tixgaliyay in la joojiyay.
Dukaan cusub oo Apple ah oo ku yaal San Francisco
Shirkadda tufaaxa ayaa go’aansatay inay ka dhisto Apple Store cusub magaalada ugu muhiimsan iyaga, San Francisco.
Cusbooneysiin ayaa ku dareysa kanaalada Apple TV: Vevo, Disney iyo inbadan
Apple waxay cusbooneysiisay kanaallada laga heli karo TV-ga Apple TV, iyadoo ku dartay Vevo, Disney Channel, Disney XD iyo in ka badan, inkasta oo dalalka qaar oo keliya.
Xulashada Dukaanka App: Ciyaaraha Gawaarida
Waxaan kugula talineynaa seddex kulan oo gawaarida loogu talagalay kuwa ku raaxeysta wadista dhabta ah iyo ciyaaraha arcade.
Dhirta iyo Zombies 2 durba way inala joogtaa heerarkeeduna aad ayuu u adag yahay, laakiin khiyaamadaan waxaan ugu dhaafi karnaa heerarkan nacaybka si dhakhso leh.
Vevo, barnaamijka fiidiyowga muusikada, waxaa lagu cusbooneysiiyay AirPlay
Vevo, codsiga loogu talagalay iPhone iyo iPad ee kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysato fiidiyowyada muusikada maalinta oo dhan, ayaa lagu cusbooneysiiyaa taageero buuxda oo loogu talagalay AirPlay.
Soo dejiso gaabis ah oo ku jirta App Store? Hubi dejintaada
Haddii markii aad ka soo degsaneysid codsi App Store aad dareentay in la qabtay si gaabis ah sidii la rabay, hubi soo degsashada isku mar.
Calaamadaha loogu talagalay WhatsApp Messenger si toos ah shaashadda Guriga ee iPhone iyada oo aan Jailbreak
Barnaamijkan cusub ee ka imanaya dukaanka waxaan ku dhejin karnaa xirmooyinkayaga ugu xiisaha badan boodhkayaga.
App-ka Apple Store wuxuu ku siiyaa barnaamijyo lacag la'aan ah bilaash
App-ka Apple Store ee macruufka wuxuu bilaabaa inuu ku siiyo barnaamijyo horay loo bixiyay lacag la’aan bilaash ah muddo xadidan.
TeamViewer QuickSupport, codsi cusub oo taageero fog ah oo loogu talagalay iPhone iyo iPad
TeamViewer QuickSupport wuxuu bixiyaa xal bilaash ah oo sahlan oo lagu xaliyo dhibaatooyinka ku saabsan iPhone-kaaga ama iPad-ka meel fog, kombiyuutar kale oo ku xiran internetka
Splyce, barnaamijka Isbaanishka oo xaaqanaya
Splyce waa barnaamij Isbaanish ah oo noo ogolaanaya inaan ka faa iideysano maktabadayada muusikada, oo bixisa howlo badan.
Apple TV waxaa lagu qotomiyey iyada oo loo marayo Bluetooth
IOS 7 waxay u oggolaan doontaa isku dheelitirka Apple TV-ga iPhone ama iPad iyada oo loo marayo Bluetooth.
Markuu Steve Jobs adduunka ka naxay isagoo tusay WiFi
Steve Jobs wuxuu ka tagay kaqeybgalayaashii Macworld 1999 hadal la'aan markii uu soo saaray laptop-kii ugu horreeyay ee WiFi, iBook G3
ChromeCast iyo Apple TV, waa laba qalab oo aad u kala duwan
Google ChromeCast iyo Apple TV ma laba qalab oo isku mid ah baa? Ka fog, waxay ku kala duwan yihiin waxyaabo badan oo ay isku mid yihiin. Waxaan kuu sharraxeynaa sida ay u shaqeeyaan
Falanqee qaababka isticmaalka qalabkaaga si aad u maamusho batteriga
Patent cusub oo ka soo baxay Apple ayaa muujinaya nidaam eegaya sida aad u isticmaasho qalabka si aad u kordhiso nolosha batteriga.
Tilmaamaha Daaweynta Antibiotic, oo ah qalab aad u fiican dhakhaatiirta
Isbitaalka de Son Espases wuxuu soo saaray Tilmaamaha daweynta antibiyootikada ee iphone iyo iPad oo aad waxtar ugu leh dhakhaatiirta iyo farmashiistayaasha.
McTube: beddelka YouTube-ka ee loogu talagalay iPad-keena
Marka la eego cilladda YouTube-ka, waa inaan ka raadsadaa internetka iyo App Store si aan ugu beddelo arjiga rasmiga ah waxaanan helay: McTube
Hadda waxaad ka iibsan kartaa iPhone la xiriira Yoigo dukaanka Apple
Yoigo wuxuu ku biirayaa liiska hawl wadeyaasha ay iPhone ka iibsan karaan iyada oo loo marayo Dukaanka Apple ee jirka ah.
Cashar barasho si loogu sameeyo akoon iTunes Store of USA
Abuur akoon iTunes Store wadan kale, si aad ugu awoodo gelitaanka waxyaabaha kaliya ee laga heli karo wadankaas
TouchCast, tafatirka fiidiyowga iyo isdhexgalka
Wax ka beddel oo la falgal fiidiyowyadaada adoo adeegsanaya TouchCast, oo ah codsi fudud oo bilaash loogu heli karo iPad-ka.
Tani waa waxa macruufka 7 u ekaan lahaa hore ee iPod Nano
App Store-ka iPad-ka hadda wuxuu u oggolaanayaa dalbashada xarfaha ee codsiyada la iibsaday
Bakhaarka App-ka ee iPad-ka ayaa helay casriyeyn aamusnaan ah oo hadda noo oggolaaneysa inaan kala soocno codsiyada la iibsaday si alif ah.
Apple wuxuu soo bandhigayaa macruufka cusub ee 7: dib loo naqshadeeyay iyo shaqooyin cusub
Apple markan waxay leedahay. Macruufka cusub ee 7 ma aha wax badan oo isku mid ah. Waxaan dib u eegeynaa astaamaheeda ugu muhiimsan.
Kani waa mashiinka ay ku isticmaalaan Apple Store si loogu beddelo shaashadda iPhone-ka
Sawirka mashiinka loo adeegsaday Dukaanka Apple si loogu badalo loona shaashado shaashadda iPhone-ka xilligan.
Immisa soo degsasho ayaa lagama maarmaan u ah in la galo Top 10 ee Dukaanka App?
Trademob waxay sameysay infographic kaas oo aan ku arki karno tirada soo dejinta ee lagama maarmaanka u ah arjiga si loo gaaro Top 10 ee App Store
Maxaan ka rajeyneynaa WWDC 2013?: Qalabka
Wax kayar iyo wax kayar ayaa ka dhiman WWDC 2013 iyo si aan u dhammeyno tirinta waxa aan fileyno, waxaan kuu soo bandhigeynaa qalabkii aan arki karnay Juun 10
iFixit wuxuu kala qaadaa 5GB iPod Touch 16G
iFixit wuxuu kala qaadaa 5GB iPod Touch 16G si loo hubiyo in qalabka uu la mid yahay noocyada 32GB iyo 64GB.
Maxaan ka rajeyneynaa WWDC 2013?: Adeegyada
Wax ka yar usbuuc ayaa u hadhay WWDC 2013, dhacdada sanadka ee la filayo, Maxay yihiin waxyaabaha aan filayno?
5GB cusub ee iPod Touch 16G ayaa dhow
Cutubyadii ugu horreeyay ee iPod Touch 5G cusub ayaa imanaya waxaanan horey u haysannay sawirro iyo fiidiyowyo na tusaya faahfaahinta oo dhow.
Video aan ku arki karno 5GB iPod Touch 16G
Fiidiyowga jiilka shanaad ee iPod Touch oo leh 16GB keyd ah oo sidoo kale lagu bixinayo kamaradda gadaal, taas bedelkeed, kaliya 249 euro.
Waan ka daalay… dabinada ku jira App Store
Waxaa sii kordheysa wax caadi ah in la arko sida ay dabin ugu jiraan App Store. Waan falanqeyneynaa.
Apple wuxuu soo saarayaa 5GB iPod Touch 16G oo aan lahayn kamarad gadaal ah
Apple ayaa bilaabay inay iibiso 5GB iPod Touch 16G ah oo aan lahayn kaamirada gadaal ee dukaankeeda internetka iyadoo qiimahiisu yahay 249 euro.
Shan kulan oo kombuyutarkaaga ah
Waxaan kugula talineynaa shan kulan oo khaas ah iPad-kaaga
Apple waxay ku cusbooneysiisaa daboolka degelkeeda websaydhka laga soo dejisto App Store
e waxay cusboonaysiisay daboolka websaydhka rasmiga ah ee Apple iyadoo ay la socoto counter-ka joogsan doona markuu gaaro 50 bilyan oo soo degsasho ah.
Moldiv: codsi weyn oo lagu abuuro «kolajyada»
Moldiv waa codsi aad u adag. Iyada oo loo marayo Moldiv waxaan awoodi doonaa inaan abuurno halabuur mahadsanidiin sawiradeenna si aan ugu dambeyntii u abuurno "isku-xir".
Icomania: Ma qiyaasi kartaa astaamaha oo dhan?
Icomania waa ciyaar cusub oo ka timid soosaaraha 4 Sawir 1 Erey. Icomania waxaan ku qasbanaan doonnaa inaan qiyaaso jilayaasha, waddammada, filimada, fannaaniinta ...
10-ka barnaamij ee ugu badan ee lagala soo baxo iPad
Isku-darka 10-ka codsi ee ugu badan ee laga soo dejiyey iPad-ka, 5 ayaa la bixiyay iyo 5 bilaash ah, iyadoo dib loo eegayo midkiiba.
FX Photo Studio HD: Tifatiraha sawir leh saameyn badan iyo naqshad cajiib ah
Codsiga dib u hagaajinta ugu fiican ee sawir qaadashada leh ee hadda ku jira App Store waxaa loo yaqaan: FX Photo Studio HD haddana waa bilaash.
Tweetbot vs Twitterrific, labada macmiil ee ugu wanaagsan Twitter ka waji ka waji
Tweetbot waa nambarka koowaad ee aan muran ka taagneyn, laakiin Twitterrific ayaa wax badan ka wanaajiyay cusbooneysiintii ugu dambeysay. Waxaan falanqeyneynaa labada macmiil ee Twitter
QuickStore wuxuu ka furayaa isku xirka App Store barnaamij kasta (Cydia)
QuickStore waa codsi cusub oo bilaash ah oo loo yaqaan 'Cydia' kaas oo kuu oggolaanaya inaad ka furto wax xiriir ah AppStore iyadoon laga tegin dalabka aad ku jirto.
IPhone ka daawadayaasha kaabta, ka soo kabso xogta kaydkaaga
iPhone Backup Viewer wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo kabato wicitaanada, xiriirada, fariimaha, sawirada ... kaydinta aad ku keydisay iTunes.
Apple waxay sheeganeysaa in qaar ka mid ah TV-yada Apple ay leeyihiin arrimo isku xirnaanta Wi-Fi
Apple waxay ku wargalisay bakhaaradeeda in qayb yar oo ka mid ah jiilka saddexaad ee Apple TV ay la kulmaan dhibaatooyin isku xirnaanta Wi-Fi.
Codsiyada isticmaalka xirfadeed ee Daawada
IPad-ka ayaa aad ugu sii kordhaya joogitaanka shaqada, gaar ahaan xirfadaha qaarkood sida Daawada. Waxaan kugula talineynaa codsiyada qaarkood.
Sida loo raaco Game of Thrones mahadsanid iPad-kaaga
Adduunyada barafka iyo dabka ayaa ku habboon in la raaco horumarka ciyaarta guusha ee Thrones
Kaydka Apple Store ee khadka tooska ah waa la cusbooneysiiyey si uu ula qabsado aaladaha taabashada
Dukaanka Apple-ka ee khadka tooska ah waxaa lagu casriyeeyay bar cusub oo jiingad ah oo aan kula dhaqaajin karno tilmaam tuse ah.
Apple wuxuu ku muujiyaa App Store da'da lagu taliyay in lagu isticmaalo barnaamijyada
Apple waxay ku dartay ogeysiiska da'da lagu taliyey iyo mid kale oo ka mid ah iibsashada gudaha-app-ka ee App Store si markaa isticmaaluhu u ogaado ka hor inta uusan soo dejin.
5 CODSIGA AH: iPoe - Edgar Allan Poe Isugeynta Isdhexgalka
iPoe waa codsi ku saleysan sheekooyinka halyeeyga argagaxa leh 4 aqrin si aan ugu madadaalino habeenada madow. Waxaan sidoo kale shaxaneynaa 5 promo-codes.
Codsiyada ugufiican ee lagu arko cimilada ipadkeena
Bakhaarka App-ka ugu fiican ayaa lagu tijaabiyaa Ipad-keena
Afarta su'aalood ee ugufiican ee laga heli karo App Store
3-da turjubaan ee ugufiican ipad-keena
3-da turjubaan ee ugufiican ipad-keena. Turjubaanku wuxuu waxtar u leeyahay markaan safar galno oo luqadda sifiican u garanaynin ...
Tookit: 5 koronto oo muhiim u ah iPad-kayga
Qalabka loo yaqaan 'Toolkit' waa barnaamij lagu qancinayo baahiyaha aanu Apple ka fulin macruufka kumbuyuutarkiisa: iPad
Ku baro Ingiriisiga mashiinka Verras Phrasal Verbs Mashiinka
Tifatirayaasha qoraalka ugufiican iPad
Erey-bixiyeyaasha ereyadu durba waa xaqiiqo App Store, waxaan falanqeyneynaa 3 ka mid ah waxaanan aragnaa inay jiraan inbadan oo ka mid ah App Store-ka.
Bogagga: processor-ka ereyga Apple
Bogagga waa erey-sameeye, laga yaabee kan ugu awoodda badan, oo ay abuurtay Apple, oo qiimahiisu yahay 7,99 euro oo laga heli karo App Store.
Racing Real 3 iyo (damnida) ku-soo-iibsashada abka
Real Racing 3 wuxuu ku biirayaa cayaaraha freemium, ciyaaraha bilaashka ah oo leh iibsasho isku dhafan oo wax walba qariya
Flow Free: Waa ciyaar madadaalo u ah galabnimada Axada
Caajisku wuxuu ku dejiyaa ciyaaraha iPad-ka, Flow Free waa ciyaar si gaar ah u wanaagsan maadaama ay ku lug leedahay wareegyo isku midab ah.
Apple waxay la kulantaa dhibaatooyin xagga App Store iyo iCloud
Dib u eeg Pro Metronome: Abka Waajibka ah ee Bilawga iyo Fanaaniinta Xirfadlayaasha ah
Waxa ugu fiican muusikiiste waa metronome, wuxuu kugu haggaayaa garaaca dhibcaha aad ka aqrinaysid. Pro Metronome waa metronome iPad aad u fiican.
3 Cayaar oo kugu dhejin doona galabnimadii caajisnimadaada
Ciyaaraha had iyo jeer waxay caajisaan caajiska mararka qaarna waxaa jira ciyaaro aad u wanaagsan oo qiimo weyn leh. Actualidad iPad-ka waxaan ku xusaynaa 3 ciyaar oo aad u wanaagsan.
Apple TV 5.2 oo leh Jailbreak. Cusboonaysiinta cusub ee Seas0nPass iyo Flash Flash (madow)
FireCore waxay cusbooneysiisay qalabka Seas0nPass iyo aTV Flash (madow) si ay u xirxiraan nooca 5.2 ee jiilka labaad ee Apple TV.
Shaqaalaha Apple waxay awoodi doonaan inay iibsadaan in ka badan seddex shey sanadkiiba qiimo dhimis xubnaha qoyskooda
Apple waxay ka saartay xaddidaadda seddex iibsi sanadkiiba alaabooyinka iyadoo laga dhimayo 15%. Hadda tirada ugu badan ee wax iibsigu waxay ku xiran tahay go'aanka shaqaalaha.
Sida loo dalbado lacagtaada iTunes
Iibsasho si qalad ah ama codsi aan ahayn wixii ay ku ballanqaaday waa wax soo noqnoqda. Apple waxay ka jawaabtaa cabashooyinkaas awgeed.
Dukumiintiyada, codsi aad u fiican oo lagu maareeyo dukumiintiyada
Documents by Readdle waa codsi aad u fiican in la soo dejiyo, la daawado lana wadaago dukumiintiyada, fiidiyowyada iyo maqalka, sidoo kale waa bilaash.
Khibradda Apple Store: marka qorshaynta badani ku dhammaato inay dhaawacdo isticmaalaha
Sheeko ka sheekeyneysa khibrada masiibada ayaa noolaa kadib markii la isku dayay in la badalo iPhone 5 oo leh dhibaatooyin gariir aan kala sooc laheyn oo ku yaal Apple Store Río Shopping.
Daaro fiidiyowyada lagu wadaago shabakaddaada FileBrowser
Maamulaha faylka faylka faylka ee 'Filebrowser' wuxuu kuu ogolaanayaa inaad marin u hesho wax fayl ah oo aad wadaagi karto oo shabakadaada ah, aad ayuu faa'iido ugu leeyahay ku ciyaarida filimada sawirada la wadaago
Joypad wuxuu kuu beddelayaa iPhone-kaaga iPad gamepad
Iyada oo Joypad Controller iyo Joypad Game Console waxaad kuheli doontaa khibrada kumbuyuutarrada ciyaarta caadiga ah ee iPad-kaaga adigoo isticmaalaya iPhone-ka sida buro kontorool
Isku-shaandheynta iPad-ka waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto gooyo 3D qabow
Ku furfuri xirfadahaaga hal-abuurka leh 'Foldify', waxaad abuuri kartaa gooyo goos goos ah oo 3D ah, ama wax ka beddeli kartaa kuwa ku yimaada arjiga, oo daabac
FileXChange wuxuu faylalka kuugu wareejiyaa iPad-kaaga adigoon haysan iTunes (Waxaan ruxnay 2 shati)
FileXChange wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku wareejiso feylasha qalabkaaga macruufka ah adoo adeegsanaya shabakada WiFi ama Bluetooth, ka takhalusida ku tiirsanaanta iTunes iyo fiilooyinka.
ShiftLife - Abaabulaha Shift ee macruufka
ShiftLife waa barnaamij ku habboon kuwa shaqeeya xilliyada shaqada. Thanks to arrimo aad abuuri karto, waxaad si fudud ugu dari kartaa kalandarkaaga
Toca Boca: ciyaaraha loogu talagalay kuwa yaryar
Toca Boca waxay soo saartaa ciyaaro loogu talagalay kuwa yaryar inay baashaalaan oo ay isla waqtigaas wax bartaan. Timo jarista, dhaqtar ahaanta, ama karinta waxay noqon kartaa wax lagu farxo
Auto Xatooyo Grand: Ku Xigeenka Magaalada ee iOS, dib ugu noqo 80s.
Rockstar waxay ka faa'iideysaneysaa sannad-guuradii XNUMX-aad ee ka soo wareegtay markii la bilaabay Grand Theft Auto: Ku-xigeenka Magaalada si loo bilaabo nooc cusub oo loogu talagalay macruufka aad jeclaan doonto.
Apple ma heli doono Cover Flow Flow hada
Xeedho cusub ee 12W wuxuu badbaadiyaa 30-45 daqiiqo oo lacag bixin ah
Qof kastaa wuu ogyahay in adabtarada cusub ee Apple 12W uu si dhakhso ah u soo dallacayo ...
'iBooks 3' iyo 'iBooks Author 2' ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo
iBooks 3, oo loogu talagalay iPhone 5
Barnaamijka Dib-u-warshadaynta Apple: waa ikhtiyaar wanaagsan oo lagu iibiyo iPhone-kaaga
Barnaamijka dib u warshadeynta ee Apple: waa qaab kale oo aad ku iibin karto iPhone-kaaga hadda jira
Dhibaatooyinka ku meel gaarka ah waxay ka muuqdaan App Store
Dad badan oo adeegsadayaal ah iyo horumariyayaal adduunka ah ma awoodaan inay kala soo baxaan barnaamijyada App Store oo ay helaan fariin qalad ah.
Hada waxaad kuheli kartaa emaylkaaga "@ icloud.com" beta-ga cusub ee iOS 6.0
Hada waxaad heli kartaa emaylkaaga "@ icloud.com"
Sida loo helo emayl «@ icloud.com» mahadsanid macruufka 6 beta 3
Apple waxay bilowday inay u ogolaato dadka isticmaala inay iska diiwaangeliyaan cinwaankooda emailka hoostooda qaybta "@ icloud.com" mahadnaqa iOS 6 beta 3.
Apple wuxuu tijaabiyaa miisas cusub baararka Genius
macruufka 6.0 wuxuu oggol yahay cusbooneysiinta barnaamijyada iyadoon la weydiinin lambar sir ah
Ku guuleystayaasha xeerarka si aad ugu soo dejiso WiFi2Me bilaash App Store
Wifi2Me: xisaabinta shabakadaha WiFi ee hadda kujira App Store (Koorsooyinka wax bixinta)
Wifi2Me: xisaabinta shabakadda ee hadda ku jirta App Store (Codes giveaway)
Apple waxay dukaankeeda cusub ka furatay Murcia
Sida looga fogaado iskudhafka otomaatiga ah ee iPhone ama iPad-kaaga iTunes
Casharbarka si looga hortago in iPhone ama iPad-kaaga si toos ah ula mid noqdaan iTunes markasta oo aad ku xirto kumbuyuutarka ama xeedho.
Apple waxay sii wadaa inay ku bedesho unugyada iPhone 4 iPhone 4S
Dhibaatooyinka keydka ee iPhone 4 ayaa ku sii faafaya moodooyin badan iyo Baararka Genius-ka waxaa lagu qasbay inay beddelaan terminal-ka dhibaatada leh ee iPhone 4S
Aerodrom, adoo adeegsanaya AirPlay on Windows
Aerodrom, adoo adeegsanaya AirPlay on Windows mahadsanidiin iPhone, iPad ama iPod Touch.
Ka iibso oo ku iibso waxyaabaha Apple ku yaal websaydhka 'Tufaaxa la Isticmaalay'
Websaydh cusub oo Isbaanish ah ayaa soo baxay maalmahan oo u adeegta sidii madal lagu iibiyo ama looga iibsado walxaha Apple-ka ...
"The Big Apple", waa buug ururiya 10 fure ee guusha Apple
Waa mooddo in la falanqeeyo furayaasha guusha Apple, qoraaga Leandro Zanoni wuxuu rabay inuu ku biiro ...
App si aad u daarto oo u joojiso Bluetooth kaydinta App Store
Farriimahaaga qoraalka u beddelo astaamo leh Symbolizer
Actualidad iPhone horey ayaan kuugu soo sheegnay oo ku saabsan Emojizer, waa barnaamijka noo ogolaanaya inaan erayadeenna iyo weedheenna u rogo ...
Muraayad aad screen iPhone on Mac la AirServer
Apple TV waxay noo ogolaaneysaa inaan ku aragno shaashadda qalabkeena macruufka ah kormeeraha TV-ga mahadsanidiisa AirPlay, ...
Flixel, waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad sawirro ku qabato dhaqdhaqaaq
Flixel waa codsi la bilaabay usbuucaan oo noo ogolaanaya inaan sawiro dhaqaaq ah ku qaadno kamaraddeena iPhone….
U rog ereyadaada emojis asal ah Emojizer. Waxaan raffle koodhadh xayeysiin ah
Haddii aad tahay isticmaale joogto ah emoticons, ma dhaafi kartid codsiga Emojizer. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho wixii ...
Xiriirka masaafada dheer waxaa gaabiyey "dhunkashada masaafada dheer"
Waxaan kuu keeneynaa codsi ugu yaraan xiiso leh taasna horayba ugu guuleysaneysay App Store. Waan ogahay…
IPhone 4 mar kale ayuu qarxaa isagoon wax dhaawac ah keenin
Mar labaad ayay dhacday: iPhone 4 ayaa qarxay, laakiin markan isagoo aan wax dhaawac ah keenin. Halyeeyga tan ...
Apple TV 3G: processor A5, 512 MB oo RAM ah iyo 8GB oo ah xusuusta gudaha
Waxay kala furaan jiilka saddexaad ee Apple TV gudahana waxaan ku arki karnaa processor A5, 512 MB oo RAM ah iyo 8GB oo keyd ah FLASH.
Sawirrada baasaboorka, hadda laga bilaabo iPhone-kaaga
Inaad haysato iPhone leh kamarad aad u fiican, maxaad u baxaysaa oo aad u qaadaysaa sawirrada baasaboorka markaan ka qaadan karno ...
Sixirka ereyada, codsi loogu talagalay barashada kuwa yaryar
Maanta waxaan kuu keenay codsi carruurta yaryar ee guriga ku jira. Waxay ku saabsan tahay «Sixirka Ereyada«, ...
Wax Ku Sawir, Qaamuuska oo dhan oo ka xanaaqsan App Store
Sawir Wax waa mid kale oo ka mid ah barnaamijyadan "boom" ee ku yaal App Store. Shan toddobaad oo jiritaan ah, durba ...
Sida looga dacwoodo barnaamijyada been abuurka ah ee ka socda App Store ilaa Apple si looga saaro
Trick: dooro bitrate-ka heesahaaga iTunes 10.6
iTunes 10.6 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato bitrate-ka muusikada aan ku wareejineyno iPhone ama iPad, adoo awoodaya inaad doorato 128, 192 ama 256 kbps.
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijyada illaa 50MB iyada oo aan lahayn WI-FI
Apple waxay kordhisay xadka cabirka ugu badan ee codsi aan ka soo dagsan karno App Store iyadoo aan lahayn isku xirnaanta WI-FI….
Cusboonaysiinta TV Spain DTT ee nooca 1.1 ayaa hadda la heli karaa
Haddii shalay aan ka hadleynay cusbooneysiinta Radio Spain FM hadda waa inaan ka hadalnaa walaashiis TV, ...
Xakamee wareegyadaada hurdada oo toos waqtiga saxda ah Smart Alarm
Smart Alarm waa codsi loogu talagalay in lagu hagaajiyo tayada nolosha, maadaama ay mas'uul ka tahay barashada wareegyada ...
TV Spain DTT: TV-ga ku jira iPhone-gaaga iyo iPad-kaaga
Daraasadda Toddobaadka: Miyaad isticmaashaa iCloud ama Dropbox?
Tim Cook wuxuu toddobaadkan ku dhawaaqay in Apple Cloud, iCloud, uu durba gaadhay wadarta 100 milyan ...
TV Spain DTT ugu dambeyntii wuxuu yimaadaa iPad (iyo iPhone)
Waxay qaadataa in kabadan hal bil oo ah Top 1 ee Madadaalada iyo gudaha Top 10 Global ee Mac App ...
AirParrot waxay noo ogolaaneysaa inaan TV-ga ka sifeyno Apple TV
AirParrot ee loogu talagalay Mac wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku siidino waqtiga dhabta ah waxyaabaha shaashadayadu ka kooban tahay telefishanka iyadoo loo marayo Apple TV 2G
Cad: hawsha ugu xiisaha badan
Apple waxay qaadaysaa talaabo adag oo ay ku xalinayso ka faa'iidaysiga shaqaalaha ee Shiinaha
Waxay umuuqataa in saxiixyada la soo aruuriyay si Apple looga codsado inay soo saarto iPhone 5 si anshax leh loo kala xulay ...
Apple's iWatch2, fikrad ah waxa saacadda Apple ay noqon karto
Ka dib sawirada iPhone SJ, kooxda ADR ayaa mar kale nagu farxay fikrad la yaab leh: iWatch2…
Apple waxay ku abaal marisaa shaqaalaheeda qiimo dhimis wax ku ool ah
Sidii aan ku dhawaaqnay, Tim Cook wuxuu la kulmay shaqaalaha Apple ee Cupertino si uu uga faalloodo natiijooyinka wanaagsan ...
Waraaqda "Transparent" ee iPad-kaaga
Anigu waxaan ahay mid ka mid ah kuwa beddelaya waraaqda iPad-ka waqti ka waqti, markaa macquul ahaan waxaan hayaa ...
ConvertMe: beddelaha ugufiican ee App Store (waxaan siineynaa 15 lambar)
ConvertMe waa kalkuleytar xariif ah oo caqli badan si loogu beddelo unugyada iyo lacagaha, shaki la'aan kan ugu fiican ee aan ka helay ...
Sannadka Cusub Nolol Cusub; qaybta cusub ee App Store
Imaatinka 2012, Apple waxay dooneysay inay ka faa'iideysato munaasabadan iyadoo ku daabacday qeyb cusub App Store oo ...
Trick: dib u fur tab dhawaan la xiray Safari
Haddii ay jiraan wax sida caadiga ah dhaca markaan wax daalacanayno, waa inaan si kadis ah u xirno tab aan doonaynin inaan xirno, laakiin loogu talagalay ...
Apple wuxuu hagaajiyaa cilladda App Store ee isticmaalayaasha leh iOS 3.1.3
Shalay waxaan kuu sheegnay in dadka isticmaala iphone-ka ee leh iOS 3.1.3 iyo wixii kahoreeyay ay joojiyeen inay awoodaan inay kala soo baxaan barnaamijyada ...
Wi-Fi ma yara yaraa? Iskuday inaad dhigto buugga gacanta
Saaxiibkay ayaa mar ii sheegay in isku-xirka Wi-Fi ee iPad-ka uusan u socon sida ugu dhakhsaha badan ...
Dhibaatooyinka iTunes-ka ayaa soo degsada barnaamijyada iyo adeegyada kale (waa la cusboonaysiiyay)
Waxay u muuqataa in Apple ay la kulantay dhibaatooyin ka hor istaagaya dadka isticmaala inay galaan koontooyinkooda isticmaaleyaasha, taasoo ka dhigeysa wax aan macquul aheyn in ...
Talo: tag goobta ay iTunes ku keydiso barnaamijyadooda
Waqti ka waqti waxaad u baahan kartaa inaad sameyso nuqul ka mid ah barnaamijyada macruufka ee ku keydsan Mac-gaaga ...
Lug ku maray dukaanka cusub ee Apple ee ku yaal New York
Jimcihii la soo dhaafay Apple waxay xarunteedii ugu weyneyd adduunka ka furtay saldhigga quraafaadka Grand Central ee New York….
iTunes 10.5.2 ayaa la heli karaa si loo soo dejiyo
Iyadoo ay weheliso beta labaad ee IOS 5.1, Apple waxay hadda sii deysay nooca 10.5.2 ee iTunes oo ay ku jiraan dhowr horumar ...
Iska yaree astaamaha Xadhigku wuxuu u socdaa sawirro
Om Nom ma kaa dhawaajiyaa adiga? Waa xiddigga cayayaanka cagaaran ee Goo Xadhig, nacnac dhab ah oo jecel ...
Christmas SMS Deluxe: in kabadan 600 oo weedho si loogu hambalyeeyo kirismaska ​​(Waxaan bixinaa 6 koodh)
Miyaad horay uga fikirtay SMS-ga aad ugu hambalyeynayso kirismaska ​​sanadkan? (Hagaag, yaa yidhaa SMS wuxuu yidhi ...
Smile2Shoot: wejiga iyo dhoolla caddaynta sawiradaada
Smile2Shoot wuxuu ku darayaa ogaanshaha wajiga iyo dhoolla-caddaynta kamaraddaada iPhone-ka, mar dambe ma ...
iBooks waxay cusbooneysiisaa habka habeenkii iyo akhriska shaashadda oo buuxa
Barnaamijka akhrinta buugaagta ee Apple ayaa hadda loo cusbooneysiiyay nooca 1.5 iyadoo horumar weyn laga sameeyay. Waxaa ka mid ah ...
Keychain Apple ah si uu ula socdo iPhone-kaaga jeebkaaga
Waxaa jira laba shay oo aadan ka maqnaan karin markaad guriga ka baxdo: iPhone-kaaga iyo furayaasha (si fiican, seddex: wax ...
Cashar barasho: Ku dhaqaaji FaceTime shabakadaha 3G ee iOS 5
Hada waad kicin kartaa shaqada si aad ugu adeegsato FaceTime shabakadaha 3G ee iOS 5. Waxaad u baahan doontaa oo kaliya iPhone leh ...
Cashar: sida loo hagaajiyo iBooks ka ku saabsan iOS 5 + Jailbreak
Marka firmware cusub iyo JAILBILN aan sax aheyn ay soo baxaan, sida midka aan hada heysano, barnaamijka iBooks badanaa ...
Xiriirada Kaabta DropBox: kaydinta xiriiriyahaaga Dropbox (Dukaanka App)
Backup Contacts waa codsi App Store ah oo aan ku sameyn karno keyd xiriiradayada ...
TV bilaash ah: Kanaalada TV-ga tooska ah (App Store)
Telefishin bilaash ah oo kujira codsi noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano dhowr kanaalo telefishan toos ah oo ka socda iPhone-keena. Waa…
Dakhliga Apple ee jaantusyada
Dakhliga Apple wuxuu ahaa kii ugu badnaa taariikhda. IPhone wuxuu ahaa dambiilaha kor u kaca ...
Fiiro gaar ah: Ha dhigin iPhone-ka qaabka DFU oo leh wax ka yar 20% batari
Marka loo eego khaladaadka cusboonaysiinta iOS 5 ay sababtay, kuwaas oo aad uga badnaa sidii hore, maxaa yeelay waxaa jira ...
'Raadi Saaxiibbaday', muranka cusub ee Apple
Toddobaadkan 'Raadi Saaxiibbaday', oo ah barnaamij ay soo saartay shirkadda Apple, ayaa iftiinka si wadajir ah loogu arkay 'Kaararka' iyo macruufka cusub ...
Luma Video Camera, xasiliyaha kamaradda fiidiyowga ee iPhone (App Store)
Luma Video Camera, codsiga leh xasiliyaha muuqaalka otomaatiga ah, ayaa noo oggolaan doona inaan ku duubno fiidiyow tayo ka fiican kan ...
Mobile Goear, ka dhageyso muusikada bilaashka ah iPhone ama iPad (App Store)
Mobile-ka 'Goear Mobile', oo ah barnaamij noo oggolaanaya inaan dhageysano muusikada bilaashka ah ee internetka, ayaa na siiya kooxo badan oo kala duwan ...
Bogagga, Muhiimka iyo Lambarada sidoo kale waa la cusbooneysiiyay
Imaatinka macruufka 5, Apple sidoo kale wuxuu rabay inuu cusbooneysiiyo barnaamijyadiisa xafiiska aaladaha iOS: Bogagga, ...
Shimbiraha careysan waxay ku nool yihiin nolol jardiinada mawduucyada ee Shiinaha
Dhowr bilood ka hor waxaan ku tusnay sida iibiyaha ugu fiican ee App Store, Angry Birds, uu ugu run noqday xayeysiin loogu talagalay ...
Sida loo cabiro batteriga ipadka
Qalab kasta oo Apple ah oo la qaadan karo (iPhone, iPad, MacBook, iPod) wuxuu leeyahay batteri lithium polymer ah, laakiin ...
Apple, waa shirkadda shanaad ee ugu casrisan adduunka
Marka joornaalka Forbes hadlo, qof kastaa wuu dhageystaa, haybadda daabacaddani runtii waa bahalnimo, wax ...
Tutorial: dhaqaajiso shaqeynta AirPlay codsi kasta oo muusig ah
Waxaa laga yaabaa in qaar idinka mid ahi ay adeegsadaan codsi ay ku ciyaaraan muusig iyo in aanu ku habboonayn AirPlay inkasta oo ay tan ...
Ka eeg iPhone-kaaga bandhigga fiidiyowga ee Apple u adeegsanayo dukaamadiisa
Haddii aad waligaa gasho App Store waxaad ogaan doontaa in badeecooyin badan oo la soo bandhigay ay leeyihiin ...
Cashar barasho: Ku keydso keydka dariiq adag oo banaanka ah (Mac)
Sidaan ku sharaxay qoraalkii hore, keydka macruufka ah si sax ah uma iftiimin oo ...
Sameeyayaasha Talking Tom waxay sii daayaan Talking Tom 2 iyo Talking Ben
Ka hadalka Tom waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu qosolka badan App Store. Jilaagayagu waa bisad saaxiibtinimo leh oo ...
Codsi, hab lagu baahiyo barnaamijyada ku jira iPad-kaaga
Inteena ugu badan waxay iPad-ka ku leeyihiin daraasiin ama xitaa boqolaal barnaamijyo ah, marka marka saaxiib ...
Kalabar dadka isticmaala iPhone WELIGABA ha u dhigmin iTunes
Markii aan akhriyay warkan, waan rumaysan waayey: mid ka mid ah labadii isticmaale ee iPhone midkoodna weligiis iskama waafajiyo ...
Haddii aad ku dhiirrigelisay inaad cusboonaysiiso macruufka 5 -sidaa darteedna iTunes 10.5 beta- ka dibna aad rabto ...
Trick: waa qaab kale oo lagu helo UDID-gaaga iDevice
Waa suurtagal inaad waligaa ubaahatay lambarka UDID (Aqoonsi Gaar ah oo Aqoonsi) si aad u tijaabiso arjiga marxaladda beta ...
IOS 5 waxay aqbashaa fiidiyowyada 1080p… wuuna ciyaaraa
Hagaag, sidaad sifiican u ogtahay, iPad-ka iyo iPad-ka 2-na ma aysan laheyn HD-ga fiidiyoowga fiidyowgu -walow ...
Sida loo dhaqaajinayo soo degsashada otomaatigga ah ee codsiyada
Hadda waad hawlgelin kartaa soo degsashada otomaatigga ah ee codsiyada laga iibsado App Store, mid ka mid ah astaamaha aan aragnay shalay. Kaliya tag ...
Tutorial: shid syncing otomaatig ah ee barnaamijyada leh iCloud
Haddii aad rabto inaad bilowdo adeegsiga isuduwaha otomaatigga ah ee barnaamijyadeena adigoo adeegsanaya iCloud, waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Dukaanka App uma shaqeeyo si ku meel gaar ah [waa la cusbooneysiiyay]
Muddo daqiiqado ah ayay suurtagal ahayn in laga iibsado ama laga soo dejiyo codsi kasta App Store. Dhibaatadu waa mid la taaban karo ...
Hadda waxaad ku daawan kartaa sawirro iyo fiidyowyo kumbuyuutar Windows ah adoo adeegsanaya AirPlay
Waad ku mahadsan tahay barnaamij uu soo saaray Thomas Pleasance hadda waa suurtogal in laga daawado sawirrada iyo fiidyowyada qalabkeena macruufka ah ...
Waraaqaha muuqaalka ciyaarta ee iPad-kaaga
Haddii aad tahay taageere ciyaaraha fiidiyowga waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad xirato mid ka mid ah ...
XGPS150, GPS loogu talagalay iPad-kaaga Wifi
Kuweena haysta Ipad Wifi oo aan 3G ahayn waa in aan u degno sedexleyn uu Wifi u sameeyay ...
OperadorApp wuxuu kuu sheegayaa shirkadda lambarka taleefanka uu yahay
Miyaad ku haysataa sicir fidsan taleefannada gacanta oo aad ka wada shaqeysid oo keliya? Hagaag, saaxiibadaa ha is diyaariyaan ...
Kiiboodhkaaga madow ka dhig kiiboodhka Madoow
Iyada oo loo yaqaan 'Jailbreak' waxaan ku guuleysan karnaa ficil ahaan wax kasta oo heer ah u habeynta macruufka iyo mid ka mid ah waxyaabaha ...
Waqtiga iyo guuldarrooyinka dahsoon
Falalka xilliyada qaarkood waxay la yaabaan mararka qaarkood. Weligaa ma kugu dhacday in shaashaddaadu si lama filaan ah isu beddeleyso madow ...
Sida loogu isticmaalo isla emaylka qalab kala duwan oo leh Facetime
Casharradan waxaad ku isticmaali doontaa e-maylkaaga dhowr aaladood oo FaceTime ah oo aad ku kala duwanaan karto markay kuu soo wacaan, waxay kula shaqeysaa akoonnada moobiilka ...
Ku darso qaabka Psd si aad u abuurto astaamo kuu gaar ah.
Hadda wixii ka dambeeya way fududaan doontaa in la abuuro astaamo noo gaar ah, inkasta oo aynaan fikrad badan ka haysan ...
Waxaan ku tijaabinay DJ World Studio iPad
Mid ka mid ah hamidayda - marka lagu daro qof kasta oo ku jira Apple - waa muusig elektaroonig ah, sidaa darteed waan joojin kari waayey ...
Server-ka App Store ayaa si kumeelgaar ah u shaqeynaya [UPDATED]
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa ka warbixinaya inaysan barnaamijyadooda kala soo bixi karin App Store-ka oo ay qalad fiican ku helayaan sida ...
Trick: iPad 2 si aad ula seexato magnet fudud
War wanaagsan ayaa u ah dhammaan kuwa mustaqbalka leh iPad 2 ee jabiyay badhanka hurdada: magnet waxaad ku sameyn kartaa ...
Qeybta cusub ee App Store: «Si Wanaagsan Wada Jir»
Haddii aad tahay qof daroogo tufaax ah, Apple wuxuu ka sameeyay qayb ka mid ah dukaamada arjigiisa gaar ahaan adiga….
Apple ma sii qaybineyso jiilka koowaad iPad
Waxaan ku dhow nahay dhab ahaan 48 saacadood ka hor intaan Apple soo bandhigin beddelka jiilka koowaad ee iPad waxaanan leenahay warar ...
Falanqaynta AirMusic: la wadaag muusikadaada si xarig-la'aan ah PS3-kaaga, XBOX360 ama qalab kasta oo leh DLNA
HORDHAC Ma leedahay PS3 ama XBOX 360 oo waxaad jeceshahay inaad dhageysato muusikada aad jeceshahay intaad ciyaareyso? Ma rabtaa inaad isticmaasho ...
Cashar: Hagaaji iBooks + Dhibaatada JAILBIL
Haddii aad jabisay qalabkaaga nooca ugu dambeeya ee iBooks ma shaqeyn doono, mar kasta oo aad isku daydo inaad furto ...
TacticsBoard, waa barnaamij kufiican tababarayaasha
Waxaan ka ahay dhinaca kuwa ciyaara, laakiin uma baahni doono waqti aan ku soo wargaliyo ...
Nooca ugu dambeeya ee iBooks wuxuu ka kooban yahay tallaabooyin ka hortagga JAILBREAK
Waxay u muuqataa in markan, Apple ay adeegsatay tallaabooyin ka dhan ah Jailbreak, oo ah nooca ugu dambeeya ee iBooks. Sida uu sharaxayo ...
Xulashada codsiyada Maalinta Jacaylka
Haddii aad wali kujirto diyaar garowgii ugu dambeeyay, si aad lamaanahaaga ula yaabto markuu shaqada ka yimaado, waxay noqon karaan ...
iA Qoraa, maanta qiimaha ugu hooseeya
Waan jeclahay tifaftirayaasha qoraalka yar yar ee iPad-ka waxaanan u maleynayaa iA Writer inuu ka mid yahay kuwa ...
10 barnaamij oo loogu talagalay dadka cusub
Maaha wax aan caadi ahayn dadka ku cusub adduunka iPhone - Kirismaska ​​ka dib, in yar - ayaa ku meeraysta weydiinta ...
IPad-kaaga ma gaabis yahay? Waa waqtigii nadiifinta
Tan iyo imaatinka macruufka 4.2 waxaan bilaabay inaan ogaado in ipadkeyga mararka qaar uusan u dhaqmin sidii hore, ma uusan soo bandhigin ...
Xarunta Ciyaaraha ayaa la jabsaday
Xarunta Ciyaaraha ayaa la jabsaday. Tani waa mid ka mid ah wararkaas oo aad iiga xumaaday, waayo? Sababtoo ah haddii ...
Macluumaadkaaga koontada Apple. Sida loo ilaaliyo xogtaada.
Wax dad badani waydiistaan, in yarna ogaadaan, waa qaabeynta koontadayada Apple. Aynu faahfaahinno xoogaa ...
iTunes mar kale jabsaday
Qiyaastii konton kun oo akoonnada isticmaala iTunes ayaa laga jabsaday Shiinaha usbuucii la soo dhaafay. Weerarka ayaa ...
Shadow Guardian HD ee iPad, Dib u eegis
Shirkadda horumarinta ciyaarta ee aaladaha moobaylka Gameloft ayaa hadda bilowday dhowr ciyaarood oo ku saabsan App Store, ...
Red Nova ee iPad, Dib u eegis iyo PROMO CODES
Shirkadda horumarinta ee Celsius Game Studios ayaa ku dhawaaqday inay soo bandhigtay kulankeedii ugu dambeeyay ee iPad, iPhone iyo…
Ku isticmaal AirPlay Mac-kaaga adoo ku mahadsan codsiga AirPlayer
Magaca Erica Sadun waxaa laga yaabaa inuusan kuu muuqan mid aqoon kuu leh, laakiin iyadu waa abuuraha barnaamijka AirVideoEnabler ee that
iPTT: Waxa ugu dhow idaacad.
Waa inaan qirto in idaacad aan ku leeyahay guriga ay tahay hiwaayad dhab ah dadka qaar. Xaqiiqdii, waad ku mahadsan tahay ...
Xalka khaladaadka "aan la aqoon (1008)" ee ka yimid iTunes Store
Haddii waligaa markii aad ka daalacatid dukaanka iTunes-ka ipadka iyo markii aad iskudayeyso inaad iibsato codsi ama ...
Graviboard. Samee astaamahaaga inay dul sabbeeyaan shaashadda iPhone-kaaga. [Cydia]
Iyada oo Graviboard, waxaad awoodi doontaa inaad ku darto cuf dhab ah shaashadda guriga ee aad iPhone. Taabashada baarka ...
Gameloft Live Press Dhacdada Video, Dib u eegis
Hadda waxaad iibsan kartaa Shimbiraha Xanaaqsan ee xayawaanku ka buuxo
Dhacdooyinka shimbiraha careysan waa wax aad looga faa'iideysan karo oo laga bilaabo Rovio waxay diyaar u yihiin inay helaan dhammaan lacagaha ay awoodaan, ...
Cirfiidka ayaa ku baaqaya FaceTime?
Sida laga soo xigtay warbixino kala duwan, inbadan oo dadka isticmaala iPhone 4 waxay helayaan wicitaano "cirfiid" dhamaadka usbuuca ...
Mawduuca Oval The 2 (iPhone / iPod iyo iPad)
Toddobaadkii hore, waxay ahayd hal-ku-dhigga ¨Fizz HD¨ maantana waxay ciyaareysaa 'The Oval Theme 2¨ The Oval Theme 2 is…
Kudar farshaxanka album-ka muusikadaada si toos ah iTunes-ka 10
IArtwork 1.4 waxaad awoodi doontaa inaad ku xalliso dhibaatada ah in la helo daboolida muusikada aad jeceshahay ¨ mid midna ...
IPhone-ka ma waxaa la alifay 2004?
Hadaad rabto inaad aragto wax aad u xiiso badan, soo dhig filimka "The Incredibles" oo hadaad si dhaw u fiirsato waxaad ...
Apple wuxuu kaliya u oggol yahay seddex xisaabood oo MobileMe bilaash ah qalabkiiba
Imaatinka macruufka 4.2, dadka isticmaala iPhone 4 waxay abuuri karaan akoon MobileMe oo bilaash ah si ay u adeegsadaan ...
Ku darso AirPrint Windows 32/64
Dadka isticmaala Microsoft Windows waxay hadda haystaan ​​codsi la heli karo oo awood u siinaya AirPrint si deg deg ah oo fudud. Qalabka ...
Microvision's SHOWWX + wuxuu iPad-gaaga u rogaa projector laser qabow
Waad ku mahadsan tahay qalabkan ay soo saartay Microvision waxaan awoodi doonnaa inaan u beddelno iPad-kayga ama iPhone-ka in aan u beddelno borojektar laser ah ...
Meel kumeelgaar ah ii guur guur adeegga. (La cusboonaysiiyay)
Haa, Mobile Me hadda ma shaqeynayo, taas oo macnaheedu yahay laba waxyaalood: Koowaad ...
Apple wuxuu ku xaqiijinayaa war-saxaafadeed: Cusboonaysiinta iOS 4.2 ayaa la heli karaa laga bilaabo maanta
Waxaan idinku koobiyey warsaxaafadeedka hadda ka soo muuqday bogagga tufaaxa ee adduunka oo dhan: «Apple ...
Ciyaaraha 25-ka ugu sareeya ee kaa qaadi doona iPad-kaaga, iPhone iyo iPod Touch, Dib u eegid 2/5
Majaladda internetka ee Mundogamers ayaa soo diyaarisay liistada 25-ka kulan ee isbadal ku samayn doona iDevices-keena. Waxay ku saabsan tahay…
Holo-Rinjiga loogu talagalay iPad-ka oo ku sawir hologram-kaaga gaarka ah, Dib u eeg
Dhowr usbuuc ka hor waxaan ku tusinay muuqaal video ah oo ku saabsan sida qaar ka mid ah Australiyaanka ay sawirada Holographic ula galeen iPad-ka. Hadda ...
Tutorial: JAILBREAK macruufka 4.1 la Sn0wbreeze 2.1 (Windows)
Sn0wbreeze 2.1 waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay «Pwnage Tool for Windows, maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad JAILBILOSKA ka sameyso macruufka 4.1 adoo adeegsanaya firmware ...
Sameeyaha Cod-sameeyaha [Cusboonaysiin]
Sameeyaha ringtone wuxuu ka mid ahaa barnaamijyadii ugu horreeyay ee loo oggolaado Apple inay ka sameysato codkeenna u gaarka ah ...
aYa-Manku ee iPad iyo iPhone, Dib u eegis iyo PROMO CODES
Iyada oo laga jawaabayo soo-jeedinta iyo faallooyinka la helay, shirkadda Austrian ee horumarinta Codsiyada iyo Ciyaaraha ee iOs, Dust.Bit.Games,…
Iyada oo la adeegsanayo qaabka Baker E-buugga waxaad iPad uga samayn kartaa buugaag aad iska leedahay
Koox horumarineed oo Talyaani ah ayaa bilaabay qaab bilaash ah oo furan oo furan si loo horumariyo buugaagta iyo majaladaha loogu talagalay ...
BANGIGA! Ciyaaryahankii ugu horreeyay ee ciyaarta iyo mobilada iskutallaabta, Dib u eegid
Bang! Cayaaraha Guddiga Reer Galbeedka ee Spaghetti, oo guul weyn ku leh Talyaaniga, ayaa dhowaan ...
Tutorial: ka saar Xarunta Ciyaaraha gebi ahaanba
Runtii inbadan oo idinka mid ah waxay ogaadeen in iOS 4.1 ismaamulka iPhone uu leeyahay ...
Dagaalkii Casriga 2: Black Pegasus HD ee iPad, Dib u eegis
Dagaal Casri ah 2: Black Pegasus HD oo loogu talagalay iPad, Gameloft's FPS cusub, ayaa laga heli karaa dhowr maalmood ...
Guutada Xiddigaha Gameloft, Sawirro Cusub iyo Fiidiyowyo, Dib u eegid
Maalmo ka hor, shirkadda horumarinta ciyaarta ee Gameloft ayaa soo bandhigtay waxa loo malaynayo inuu mid kale noqon doono ...
Ka hawlgeli FaceTime waddamada aan taageerin mahadnaqa Hacktivator
War wanaagsan ayaa u ah isticmaaleyaasha Bariga Dhexe ee leh iphone 4 maxaa yeelay mahadsanid isbadal cusub new
Racing taxadar la'aan HD ee iPad, Dib u eegis
Racing Race HD-ga loogu talagalay iPad-ka ayaa ah mid ka mid ah ciyaaraha tartanka degdegga ah ee isku daraya qaabka ciyaaraha ...
Greenpois0n waxaa lagu cusbooneysiiyay taageerada iPod Touch 2G (MB iyo MC)
Nooca cusub ee Greenpois0n, markan wuxuu ku habboon yahay iPod Touch 2G labadaba MB iyo MC iyada oo loo marayo ka faa'iideysi cusub oo ...
11ka Mabaadiida Steve Jobs ee Guusha iPads, iPhones, ama iPods uu ku saleysan yahay John Sculley
John Sculley Maamulaha guud ee Apple intii u dhaxeysay 1983 iyo 1993 wuxuu mas'uul ka ahaa xil ka qaadista Steve Jobs 1986 iyo ...
Tusaalooyinka intee in le'eg ayey dhab ahaantii ku kacaysaa sameynta codsi ku saabsan iPad-ka, Dib-u-eegid
Twitterific Twitterific, oo ah barnaamijka ugu caansan Twitter ee ku yaal App Store, ayaa si gaar ah loogu sameeyay dadaalkeenna. Craig Hockenberry,…
Immisa ayey runti ku kacaysaa in la sameeyo codsi ku saabsan iPad-ka, Dib-u-eegid
Weligaa ma is weydiisay intee in le'eg ayey ku kacaysaa sameynta codsi ku saabsan iPad-ka? Miyaadan rabin inaad ogaato waxa ...
FaceTime waxay ku dari kartaa shirarka fiidiyaha kooxeed
FaceTime, codsiga rasmiga ah ee wada-hadalka fiidiyowga ee iPhone 4 iyo iPod taabashada 4G, ayaa lagu dari karaa horumarin. Isticmaalaha golaha ...
iMusician PJS ee iPad-ka, qorista muusikada weligeed sidan uma fududaan, Dib u eeg
Caan ka noqoshada iPod-ka waxaa gaar ahaan lagu gaadhay awooda ay u siiso dadka isticmaala marin boqolaal ah ...
Aralon: Seef iyo Hooska sawirada dhabta ah ee dhabta ah iyo trailer cusub, Dib u eegis
Muuqaalkii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Aralon': Seef iyo Hooska ayaa ku soo dhacay internetka, waana wax fiican. Aralon ayaa ku xiga ...
Apple waxay bixisaa liiska wadamada aan lahayn Facetime
Markii ugu horreysay Apple waxay si rasmi ah u daabacdaa liiska astaamaha IPhone 4 ee laga heli karo dalal kala duwan….
Qeybta cusub ee App Store oo loogu talagalay xaqiiqda la kordhiyay
Apple waxay ku daabacday qayb cusub AppStore u heellan xaqiiqda la kordhiyay oo ay ku kulmaan ...
Gabdhaha Cimilada ee dhabta ah ee loogu talagalay iPad, 12 gabdhood oo maalin walba kaa farxiya, Dib u eeg
Steve Dworman Enterprises, Inc ayaa maanta ku dhawaaqay daahfurka barnaamijkooda cusub ee iPad-ka. Codsigan cusub ayaa ah ...
Flexicorder: Kaamirooyinka beddel inta aad duubeyso fiidiyowga
Codsigan cusub waxaad ku beddeli kartaa kamaradaha hore iyo gadaal ee iPhone 4 intaad duubeyso fiidiyow ...
Lifelike - Saacadda Alarm iyo Saadaasha Hawada HD ee iPad, Dib u eegis
Waxaa jira tanno saacad qaylodhaan ah iyo barnaamijyo saldhigga cimilada ah oo ku yaal iPad App store. Laakiin marnaba never
Auto Xatooyo Grand: Chinatown Wars HD ee iPad, Dib u eegis
Bilooyin sugitaan kadib, mid kamid ah cayaarihii ugu fiicnaa ee jeebka abid la sameeyo ayaa ugu dambeyntii soo degay ...
Maxay Apple u isticmaashaa istiraatiijiyad kala sooc ah iyo sidee uga dhigeysaa inay adiga kuu shaqeyso
Waxaan ka helnay akhris xiiso leh usbuucaan Mark Sigal oo ku yaal O'Reilly "Istaraatiijiyadda Qaybta ...
Top 10 Twitter Apps ee iPad, Dib u eeg 2 Qaybta
Waxaa jira codsiyo badan oo runtii aad u xiiso badan oo Twitter ah oo na siiya khibrad runtii aad u wanaagsan oo ku saabsan shabakadda microblogging. La aan…
Top 10 Twitter Apps ee iPad, Dib u eeg 1 Qaybta
Twitter wuxuu ku arkay koritaan aad u weyn barmaamijka micro-blogging-ka sida iPad-ka uu ...
Kiniinkee ayaa kugu habboon adiga? Dib u eegid, Casharro iyo fiidiyowyo aad adigu go'aansato
Isbedelka tikniyoolajiyadda ee xilligan taleefannada gacanta ee casriga ahi wuxuu fursad u siiyay shirkadaha abuuraya aalado ...
Difaaca Buluuga: Wave Second! ipadka, ma awoodi doontaa inaad difaacdo meeraha oo dhan? Dib u eegid
Difaaca Buluugga: Wave Second!, Oo ah ciyaar difaac ah oo qaab difaac ah oo qaab difaaceed u qaabeysan oo ka socota shirkadda Bisad a
AutoCAD WS oo loogu talagalay iPad-ka isla markaana naqshadee wax kasta oo aad rabto, Dib u eeg
Waxaan ognahay muddo dheer in nooca iPad ee Autocad la bilaabayo, tan iyo ...
Catan HD ee iPad, sidee gumeyste noocan oo kale ah u tahay? Dib u eegid
Ugu dambayntii waa timid! Ciyaartii caadiga ahayd "Dejiyeyaasha Catan" ayaa hadda loo heli karaa iPad!. Caadiga ah ee ...
Kooxda 'Dev Team' waxay fureysaa furayaasha firmware-ka Apple TV-ga cusub
Aynu u gudubno qaybo ka mid ah: Apple waxay ku daabacday boggeeda cusub firmware-ka AppleTV, waad ka soo dagsan kartaa halkan. Sidaad aragtay, waan ogahay ...
Princess Isabella: Habaarka Witch ee HD, Dib u eegis
Princess Isabella waxay ku dhowdahay inay guursato jacaylka nolosheeda, Amiir Adam. Laakiin markii uu soo noqday ...
Kitaabka Quduuska ah ee Carruurta ee loogu talagalay iPad, Dib u eegis
BCNmultimedia ayaa maanta shaacisay daahfurka Kitaabka Quduuska ah ee Carruurta 2.0, cusbooneysiinta codsigeeda bilaashka ah ee weyn ...
Ku noqo Jasiiradda Mysterious - Daabacaadda Deluxe ee iPad, Dib u eegis
Waxaa dhiirrigeliyay sheekada caanka ah ee Jules Verne: The Mysterious Island, waxay cinwaan cusub u tahay iPad-ka oo ...
Xannibaadda Breaker Deluxe 2 gebi ahaanba bilaash dhawr saacadood
Waxaan hadda ka ogaanay barta twitter-ka in ciyaarta loo yaqaan 'Block Breaker Deluxe 2' ay diyaar u tahay in si buuxda oo bilaash ah looga soo dejiyo wax yar ...
Raha Jeebka ee iPad-ka, ka taxaddar inaad ku xirnaato… Dib u eeg
Waxaa jira adduun cusub oo cusub oo laga baari karo iPad-kaaga jeebka jeebka ee shirkadda Nimblebit, hal abuureyaasha ...
Daalacashada Web Daaqsimeedka ee iPad-ka, biraawsarka ugu fiican ee aniga ii fiican, Dib u eegis
Runtu waxay tahay ma jecli inaan qoro tan. Maya, aan fikiro: Waan jeclahay marka xaqiiqooyinku i tusayaan taas ...